Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): May 2013
KBC NI KIO DAT KASA NI HPE MAGUN LIT (74) HTE HKALUM
at 5/31/2013 07:08:00 PM
Myen asuya hte mung masa bawngban na matu du sa wa ai KIO dat kasa ni hpe KBC hku nna htunghking magun lit hte hkungga jaw hkalum la ai lamang hpe May 29 ya shana 7:00 pm ten hta Myitkyina mare Shatapru lawk (1), KIO Kyithkai Rung kaw galaw lai wa sai lam chye lu ai.
Dai lamang hta KBC Ginjaw hte Ginwang (15), Myitkyina, Htingnai, Waimaw Ginwang ni de na Buga Hpung ni, Norway, Singapore, Japan, Thai, Australia, Malaysia Mungdan ni de du nga ai Wunpawng sha ni hku nna gun jaw ai magun lit yawng (74) du ai lam chye lu ai.
Lamang hta KBC Ginjaw magam gun ni, Gunwang Amu madu ni, Buga Hpung de na Hpung woi Sara/num ni, Hpung ningbaw ningla ni yawng marai (300) jan du lawm nna KIO ningbaw ningla ni hte hku hku hkau hkau hkrum shaga kanawn mazum lu ai lam, Akyu hpyi ya ai lam, Rev. Gunhtang La Myen hku nna Karai mungga hte n-gun jaw, Rev. Sinwa Naw kyu hpyi ya ai hte KIO dat kasa ni mung grai n-gun lu myit pyaw kabu ma ai lam chye lu ai.
Ndai zawn galaw ai lamayaw shada ai lam gaw Wunpawng myu sha ni yawng hte KIO gaw langai sha re lam hte KIO gaw Wunpawng sha niagawng malai re lam hpe Asuya hte maigan ni yawng chye lu na matu yaw shada ai lam lamang hpe woi awn ai KBC Amu madu Rev. Dr. Hkalam Samson kaw nna chye lu ai. KBC MNK
ပူတာအိုက ကျေက်စိမ်း ထွက်တဲ့ ဆန်ဂေါင် က နေ ရေခဲတောင်ထိ တေဇ ယူလိုက်ြပီ။
at 5/31/2013 02:27:00 AM
ပူတာအိုက ကျေက်စိမ်း ထွက်တဲ့ ဆန်ဂေါင် က နေ ရေခဲတောင်ထိ တေဇ ယူလိုက်ြပီ။ သူလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားလိုက်ပြီ။ ဒေသခံတွေ အတွက် မြေ မရှိ တော့ဘူး။
KIO နဲ့မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြတဲ့ မနောကွင်း၊ မဂျွယ်ခန်းမရဲ့ 
ပြင်ဆင်စရိတ် ကျပ်သိန်း ၁၂၀၀ ကျော်ကို တေဇ က အိတ်စိုက်ထုတ်ပေးသတဲ့။
တေဇက ဘယ်ကဘယ်လို ဒီခန်းမပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့် ရသွားတာလဲ။
ကြားက ဘယ်သူတွေ ပွဲစားလုပ်ခဲ့တာလဲ။ မေးကြမြန်းကြ စစ်ကြဆေးကြပါဦး။
ကချင်ပြည်သူတွေဆီ ဖလားကိုင်ပြီး အလှူခံထွက်ကြပါလားဗျာ။
မလောက်သေးဘူးလား..၊ ရှမ်း ကရင် ချင်း ရခိုင် မွန် ဗမာ စတဲ့
တိုင်းရင်းသားတွေဆီ တောင်းပလုံးလေးတွေကိုင်ပြီး လှူခိုင်းစမ်းပါဗျာ။
ခုဟာက ငြိမ်းချမ်းရေးဗန်းပြပြီး ဟိုလူအမြတ်ထုတ် ဒီဟာအမြတ်ထုတ်နဲ့ 
at 5/31/2013 02:18:00 AM
panglung matut 71
at 5/31/2013 02:05:00 AM
မေလ ၂၉ ရက်နေ့က KIO က လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ရန် တောင်းဆိုလို့ အစိုးရ အငိုက်မိ အကြပ်ရိုက်သွားတယ်လို့ စစ်ဖက်နီးစပ်သူများက ဆိုပါတယ်။ အစိုးရက ခွင့်မပြုသေးတဲ့ အချိန်မှာ
ကချင်နှစ်ခြင်း အသင်းတော် ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ Rev ခလာမ်ဆမ်ဆွန်နဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက ဖိအားပေး တောင်းဆိုခဲ့လို့ ဆန္ဒခံယူပွဲ အစား ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ထုတ်နှုတ်စေပြီး ရှင်းလင်းပွဲ ပုံစံကို လိုက်လျော ပေးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စီတာပူ မနောကွင်းရှိ ကချင် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ဗဟိုရုံးမှာ (၃) နာရီကြာ ကျင်းပပေးခဲ့ရပါတယ်။ ရှင်းလင်းပွဲနှင့် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကချင် နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ်မှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဒေါက်တာ တူးဂျာတို့ အပါအဝင် အင်အား (၃၀၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကချင်ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထား တချို့ကို ကောက်နှုတ် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။+++read more++click on link++
Seven Points Agreement of Myanmar's Union Peacemaking Committee and the Kachin Independence Organization (KIO) signed in Myitkyina today.
at 5/30/2013 06:37:00 PM
(၁)-နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အိုတို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူသည်။
(၂)-နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့များမှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများလျော့ချခြင်း၊ တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူသည်။
(၃)-နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် မူအားဖြင့် သဘောတူသည်။
(၄)-နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သည့် ပြည်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ညှိုနှိုင်းကာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူသည်။
(၅)-တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်နေရာချထားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ညှိုနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူသည်။
(၆)-လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကိုညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ်အဖွဲ့ကို မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ထားရှိသွားရန် သဘောတူသည်။
(၇)-နောက်တကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ယခုအကြိမ်တက်ရောက်သည့် အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပြန်လည်တက်ရောက်ရန် သဘောတူညီသည်။ အခြားဖိတ်ကြားလိုသော အဖွဲ့များရှိပါက နှစ်ဖက်ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူညီသည်။
— Agreement of Myanmar's Union Peacemaking Committee and the KIO (4 photos)
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးအား ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်များ ဂုဏ်ပြု
at 5/29/2013 06:47:00 PM
By:Jade Land's photo.
Post 29 May 2013 by Kachin Wave News
မေလ ၂၉ ရက်တွင် မနော်ကွင်းရှိ ရိုးရာခန်းမ ဆောင် ၌ ကချင်အမျိုးသားများ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့(WMR) နှင့် ကချင်လူထုခေါင်းဆောင်းများမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်လာသော ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr.VJ Nambia နှင့် Mrs.Maria တို့အား ကျေးဇူးတင်သည့် အနေဖြင့် ကချင်ရိုးရာ မဂွန်လစ်( Magun Lit) ထမင်းပလိုင်နှင့် ကချင်ရိုးရာ ၀တ်စုံများ ဖြင့် ချီးမြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ကချင်လူထုများမှ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်လာသော ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် ၂ ယောက်အား ကျေးဇူးတင်သည့် အနေဖြင့် အခုလို ကချင်ရိုးရာလုပ်ထုံ လုပ်နည်းအတိုင်း ကျေးဇူဆပ်၊ အသိအမှတ်ပြုကာ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိလာအောင် အဆုံးထိ ပါဝင်သွားရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်နဲ့ မာရီယာတို့ က ခင်ဗျားတို့နောက်မှ အမြဲရပ်တည်ပေးနေမှာပါ။ ခင်းဗျားတို့ကြိုဆိုခဲ့တဲ့ ခင်းဗျားတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေ ခင်းဗျားတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက် ဘယ်မှ ပြေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကို သိနေပြီ။ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာ ပါဝင်သွားဖို့ ကတိပေးပါတယ်” ဟု Mr.VJ Nambia က အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသခံပြည်သူများမှ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် ၂ ယောက်အား ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးဖို့ မျော်လင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းကို ကုလ အစီအစဉ်အတိုင်း မှန်ကန်စွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း စစ်ရှောင်သူများအား ဆက်လက်ကူညီပေးရန် မျော်လင့်ကြောင်းနှင့် ကတိပေးထားသည့် အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ မျော်လင့်ကြေင့် အစရှိသည်တို့ကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲအား မေလ ၃၀ မှ ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။
at 5/29/2013 06:45:00 PM
May 28-29, 2013 lahkawng ya laman KIO datkasa ni hte myen asuya simsa lam tam datkasa ni bawngban ai hta myen asuya maga na KIO hpe (ceasefire) gap hkat jahkring na matu laja lana shadut wa ai lam na chye lu ai. Myen asuya maga na tsun ai hta: KIO ni tang shawn ai hte maren Mung Masa Bawngban sa wa na ngu ai hpe myit hkrum ya sai rai tim mung masa bawngban na matu gap hkat shawng jahkring ra ai, gap hkat jahkring sen htu saga nga nna atik anank shadut wa ai lam na chye lu ai.
Mungkan UN hte Miwa niamanemung masa ahkaw ahkang la mayu ai re hpe asan sha mu mada lu nga ai, UN hte Miwa niamaneKIO gaw gap hkat nkam jahkring ai, simsa lam hpe nra sharawng ai re nga nna dingsa KIO hpe mara rim na matu maw lanyet kaba hte KIO hpe mahkam hkam ai re ngu maram lu nga ai.
KIO hku nna gaw Mi Shwili zuphpawng kaw myit hkrum da sai hte maren "gap hkat njahkring ai sha hpyen majan hpe shayawm mat wa na hte hpyen majan hte manghkang maram masam hpung hpe hpaw sa mat wa na, dai hpang hpyen majan gaungwi zim mat wa na, hpyen majan zim mat jang mung masa bawngban sa wa na" ngu ai masa hpe ngang ngang tek jum let sa wa na re lam na chye lu ai. Mung masa bawngban ai shaloi mung "amyu kaji bawsang yawng shang lawm ai bawngban hpawng hpe rau kalang ta galaw sa wa na" ngu ai lam re.
Gap hkat jahkring (ceasefire) sen htu dat ai hte myen asuyaamung masa gaw manu mana tsaw mat wa ai sha n-ga mungkan manemung myipan arawng lu ai hte Teing Seng wa mung Noel Prize lu, KIOamung masa gaw mi na ta raw bai htingnut mat, tat sum kau sai shara ni hpe mung bai nmai gasat la mat, rai mat na hpe mu mada lu nga ai. Ya gap hkat jahkring tawn sai SSA dingdung hte SSA dingda lahkawng yen hpe pyi myen dap ni hpa n-gawn ai sha shagyip shagyeng rai htim gasat ai hpe yu yang myen gaw tara nlang sadi ndung kam ai hku galaw nga ai re hpe mu mada lu nga ai. Dai majaw ya yang KIO hte Myen Asuya dap ni gap hkat jahkring mai ai nmai ai gaw Myit ngring ai mana wa pyi chye na re.
By/Myutsaw kasa blog
at 5/29/2013 06:39:00 PM
at 5/29/2013 06:38:00 PM
May 29, 2013 by DVB News
ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေဟာ သူတို့ဆန္ဒနဲ့ တူညီတယ်လို့ ကချင်ပြည်သူတွေက ပြောပါတယ်။
မေ ၂၈ ရက်က စတင်တဲ့ အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ အခြေအနေကို မြစ်ကြီးနား စီတာပူရပ်ကွက် မနောကွင်းက မဂျွယ်ခန်းမမှာ ကေအိုင်အိုက မြို့မိမြို့ဖနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို တင်ပြရာမှာ လူထုက အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာလို့ တက်ရောက်တဲ့သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ တိုက်ပွဲအရှိန်လျှော့ချဖို့နဲ့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်း အဓိကထားဆွေးနွေးမယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်က ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ် လူထုက တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့ လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရာက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် ဦးဆန်အောင်က ပြောပါတယ်။
“သူတို့ရပ်တည်ချက်က အရင်တုန်းကလို step by step သွားတာကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်ပေါ့။ အစိုးရကကျတော့ ဒါကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲ အပစ်ရပ်ဖို့ပဲဖြစ်နေတော့ နည်းနည်း ကွဲလွဲမှုရှိနေတယ်။ မှန်းရတော့ ခက်တယ်။ အစိုးရက ဘယ်လောက်ထိ ပြင်ဆင်မှုရှိလာလဲဆိုတာမှာလည်း မူတည်မယ်။ ကေအိုင်အိုဘက်ကတော့ အရင် သဘောတူထားတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို ဆက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကို ဦးတည်နေတဲ့ သဘောရှိတယ်။”
မနက်ပိုင်းမှာ ကချင်လူထုဟာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေနမ်ဘီးယားနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ အထူးကိုယ်စားလှယ်က တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပေးသွားမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို လူ ၃၀၀ ကျော် တက်ရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဒေါက်တာ တူးဂျာကလည်း လူထုအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသလို အလားအလာကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေတရပ်၊ ပြည်တွင်းမှာ၊ မြစ်ကြီးနား မနောကွင်းမှာဆိုတော့ အလားအလာကောင်းပေါ်ထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်တယ်။ နောက် နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်ရေးတွေကလည်း ရန်ကုန် တရုတ်သံရုံးက လူကြီး တယောက် နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ပါကြတယ်။ နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်သူလဲ လာထိုင်ပေးတယ်။ အဲဒါတွေက ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ့။ အရင်ကမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးလေ။ အကျိုးရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ လူထုအရှေ့မှာ လူထုနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ အရင်ကလို နိုင်ငံခြားမှာ ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူး။ အများကြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာတယ်။”
လူထုဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေဟာ စိတ်ထဲမှာ ရှိတာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ တက်ရောက်လာတဲ့ ဂျီဘရန်ရှောင်က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကလည်း ရသလောက် အရင်ယူရမယ့် သဘော။ လိုချင်တာ ၁ ကျပ်ဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ၁ မတ်၊ ၅ မူးရရင်လည် ရတဲ့အခြေအနေမှာ ရောင့်ရဲသွားရမယ့် စိတ်မွေးကြဖို့ အားလုံးကို ပြောဆိုကြတယ်။ အဲအတိုင်းမျှော်လင့်ထားတယ်။ အပြည့်အ၀ကြီးရမယ်လို့တော့ မထင်ဘူး။ ကျနော်တို့ စစ်ဦးစီးချုပ်ကလည်းပြောပါတယ်။ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အရင်အဆင်ပြေတဲ့လမ်းကြောင်းရရင် ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ ကျန်တာကို ဘယ်လောက်အတို်င်းအတာ ရမယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး တောင်းဆိုသွားမယ်ပေါ့။”
ဒါ့အပြင် တပ်နေရာချထားရေး၊ တိုက်ပွဲတွေလျှော့ချရေး တပ်ပိုင်ဆိုင်းရာ ကိစ္စတွေကို အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အိုတို့ ဒီနေ့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ မြစ်ကြီးနားမှာ သတင်းရယူနေတဲ့ ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက် ကိုအောင်ထွန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရ ၂၀၁၁ နှစ်လယ်ပိုင်းကစပြီး တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ကတည်းက အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ် ၁၁ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးပွဲတုန်းကလည်း နှစ်ဘက် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ဒေသက တပ်ကိစ္စနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ပြီးလျှော့ချဖို့အတွက် အောက်ခြေတပ်ထိ ညွှန်ကြားသွားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
at 5/28/2013 07:15:00 PM
Kno Ndau Shabra Laika- 27 May 2013
at 5/28/2013 07:12:00 PM
panglung matut 70
Jinghpaw Dimogresi Ginrun Patiakyu hpyi garum dat ai lam
at 5/28/2013 07:11:00 PM
Madu gaw anhte myu nianingbaw
Kachin Alliance for Democracy (KAD)
Kachin Alliance Party for Democracy (KAPD)
Karai Kasang gaw anhte myu nianingbaw, Karai Kasang gaw anhte wunpawng sha ni hpe shaman chyeju jaw u ga law. Dai ni gaw anhte Jinghpaw Wunpawng sha niamung masa asak ning pawt rai nga ai KIO/KIA dat kasa salang ni hte Myen salang dat kasa niamung masa bawng ban jahkrup na ninghtoi rai nga ai. KIO/KIA gaw Jinghpaw Wunpawng sha niamatu Karai Kasang shamying ya ai shing teng mying nan rai nga ai. Dai hte maren KIO/KIA dai ni du hkra grin nga ai lam gaw Jinghpaw Wunpawng Salang niaatsam hte nrai, Karai kasang bausin ai shingnip hta hpung shingkang rawng nga ai KIO/KIA she rai law. Dai ni anhte myu sha yawngasai salum rai nga ai, KIO/KIA gaw myu sha hte mung dan lam hpe daw dan hparan shaga htinglet na rai nga ai. Anhte Kachin Alliance for Democracy (KAD), Kachin Alliance Party for Democracy (KAPD) hku nna daini na zuphpawngantsa Karai Kasang bausin ya, shaman ya, lam woi ya u ga ngu nna akyu hpyi garum dat ga ai law.
Karai Kasang gaw anhte myu sha ni hpe galoi mung bausin up hkang ya nga u ga
Akyu hpyi let
KIO နှင့် မြန်မာအစိုးရ မြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးပွဲ ရုပ်သံ(မေ.၂၈)-၁
at 5/28/2013 01:09:00 PM
KIO နှင့် မြန်မာအစိုးရ မြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးပွဲ ရုပ်သံ(မေ.၂၈)-၁ KIO နှင့် မြန်မာ အစိုးရ တုိ့ရဲ့ မြစ်ကြီးနား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ မြင်ကွင်းရုပ်သံ ( ၂၈ မေလ ၂၀၁၃၊ မနက်ပိုင်း) Zup hpawng jahpawt daw (28.5.2013) (DVB)
KIO/KIA ကိုယ်စားလှယ်များအား ကချင်ပြည်သူများ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆို
at 5/28/2013 02:33:00 AM
ပြည်သူတွေကိုကိုယ်စါးပြုတဲ့အဖွဲ့အစိုးရတက်ပါစေ(click on link)welcome KIO/KIA
at 5/28/2013 01:59:00 AM
An hteaawng padang Yehaw wa Karai kasang
ဒူဝါ အနေနဲ့ ဗမာ စစ်တပ်ကို ဝေဖန်တဲ့အခါ တချို့က မြန်မာနိုင်ငံ ကို မကောင်းပြောတယ်လို့ တုန့်ပြန်တယ် သတိထားမိတယ်။
at 5/27/2013 09:58:00 AM
တကယ်တော့ ဗမာ စစ်တပ်ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားမပြုသေးပါဘူး။ သူတို့ အင်အားရှိလို့သာ သေနတ် နဲ့ ချိန်ပြီး အဓမ္မ အာဏာယူထားလို့ သူတို့ နေရာ ရနေတာပါ။
ဗမာ စစ်တပ်ဟာ ပြည်ထောင်စု စစ်တပ် စစ်စစ်မဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာလဲ အားလုံး အသိပါ။ တချို့ကတော့ ဗမာစစ်တပ်ကို ပြည်ထောင်စု စစ်တပ်ပါ။ တိုင်းရင်းသား အားလုံး ပါတယ် လို့ ကြိုးစား ပြောနေတာ တွေ့ရတယ်။ အခုလက်ရှိ ဗမာ စစ်တပ်ကို ပြည်ထောင်စု စစ်တပ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဗမာလူမျိုး အချို့က လွဲပြီး တိုင်းရင်းသား အားလုံးက သဘောတူသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ သဘော မတူဘူးလို့လဲ ပြောလို့ မရသေးဘူးလေ။ ဖမ်းမှာပေါ့။ သူတို့က စရဖ တို့၊ SB တို့နဲ့ သေနတ်လာလာထောက် တယ် မလား။ ဘယ်သူပြောရဲလဲ။ အဲ.. ထောက်ခံတဲ့လူလောက်ပဲ ပြောရဲမယ်။ (ဒါက အမှန်တွေပါ။)
လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါတယ် ဆိုတာ ဗမာ စစ်တပ်မှာ ပဲ မဟုတ်ဘူး၊ အင်္ဂလိပ် ခေတ် စစ်တပ်၊ ဂျပန်ခေတ် စစ်တပ် တွေမှာလဲ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါလဲ အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်၊ ဂျပန် စစ်တပ်လို့ပဲ နာမည်ပေးတာပါ။ ကချင်လူမျိုး သီးသန့် နဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ ဂျပန် တော်လှန်ရေး တပ် (Kachin Ranger) ကိုတောင် မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ကချင် စစ်တပ် လို့ အသိအမှတ် မပြုသေးပါဘူး၊ အမေရိကန် စစ်တပ်လို့ပဲ နာမည် ပေးတယ်လေ။
ပြည်ထောင်စု တပ်ဆိုတာ အားလုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးပြီး လူမျိုးစု အားလုံးက တညီတညွတ်ထဲ သဘောတူနိုင်မဲ့ မူဘောင်အပေါ်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်တပ်ကို ခေါ်ရမှာပါ။ အခုထိတော့ ဗမာ လူမျိုး အုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်တပ် ဆိုတော့ ဗမာ စစ်တပ်ပါပဲ။ ဗမာ့ လူ့ဘောင်အတွက်ပဲ ကြည့်မယ်။ ဗမာ စစ်တပ်က ကချင်လူ့ဘောင်အတွက် မဟုတ်လို့ပဲ ကချင်ဘုရားကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတာကိုး... ပြည်ထောင်စုမှာ ကချင်လူမျိုးလဲ တမျိုး အပါအ၀င် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ပြည်ထောင်စု စစ်တပ် ဆိုရင် ကချင် ဘုရားကျောင်း ဖျက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလေ။ ကရင် (ကေအန်ယူ)၊ ကချင် (ကေအိုင်အေ) စစ်သားတွေ ဘယ်တော့မှ ဘုရားကျောင်းမဖျက်ဖူးဘူး။ စေတီ ပုထိုးများ မဖျက်ဖူးဘူး။
at 5/27/2013 09:43:00 AM
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ဟူးကောင်းဒေသရှိ ယုဇန စီမံကိန်းများမှ ရွှေ့ပြောင်းဒေသခံများ၏ ဘ၀ အခြေအနေ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
at 5/26/2013 08:25:00 PM
Mungchying Rawt Jat (MRJ) အဖွဲ့မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြစ်ဆုံရေကာတာနှင့်
ယုဇနကုမ္ပဏီ ပီလောပီနံ စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းများကြောင့်
အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းရသော ဒေသခံများအတွက် ဆောက်လုပ်ထားသော
စံပြကျေးရွာစခန်း ၃ ခု၏ လက်ရှိအခြေအနေအခက်အခဲများကို တင်ပြထားသော “စံပြ
မဖြစ်သည့် စံပြစခန်း” အစီရင်ခံစာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
ကျင်းပရန်ရှိပါသည်။ MRJ အဖွဲ့ဝင်၂ ဦးမှ မိမိတို့
You are invited to attend the press conference by the Kachin affected
farmers group “Mungchying Rawt Jat”. MRJ will launch the report “A
Model Village which is no Model” about the lives of rural Kachin
living in3different relocation camps who were forced to move because
of the Myitsone dam project and the Yuzana mono crop plantation in
Hugawng. MRJ members will present the report and will further explain
about their lives in the camps.
Date – 27 May 2013
Place – Excel Treasure Hotel
10th Flr, Ruby Hall
No(520), Kaba Aye Pagoda Road, Shwe Gone Dine, Bahan
Contact – Ms. Ah Htung, Mobile – 09-40001994
Lt-Gen N'ban La Awng, Vice-Chairman of KIO interviewed with BBC(click on video )
at 5/26/2013 06:58:00 PM
Lt-Gen N'ban La Awng, Vice-Chairman of Kachin Independence Organization interviewed with the BBC Burmese Service.
at 5/26/2013 09:33:00 AM
panglung matut 69
at 5/26/2013 09:13:00 AM
by:Myutsaw kasa blog
at 5/25/2013 10:58:00 AM
Panglung matut 68
at 5/25/2013 10:51:00 AM
bY-FACEBOOK/Ku Hser-Thein Sein group killing Burmese monk AND ethnic groups
at 5/24/2013 10:04:00 AM
panglung matut 67